ठूला जलविद्युत आयोजना धमाधम खारेज हुँदै - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
ठूला जलविद्युत आयोजना धमाधम खारेज हुँदै
फागुन २४, २०७४ 6324 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
सरकारले वर्षौंदेखि तोकिएको काम नगर्ने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीका नाममा रहेका ठूला जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको खारेजी सुरु गरेको छ ।
काम नगर्ने, तोकिएको विवरण नबुझाउने र खोला ओगटेर बस्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि खारेज गर्न थालिएको हो । अनुमतिपत्र लिएको ५ देखि ७ वर्षसम्म पनि अध्ययन पूरा नगरी यो वा त्यो बाहनामा खोला ओगट्ने कम्पनीसँगका आयोजना अब खोसिनेछन् ।
सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने वा खारेज गर्ने पूर्ण अधिकार जलस्रोत तथा ऊर्जा सचिवमा हुन्छ । विद्युत विकास विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले काम नगर्ने कम्पनीका आयोजनाको विवरण माग तथा खारेजी सूची बनाइरहेको छ ।
खारेजीको पहिलो निशाना भारतीय कम्पनी केभिआर इन्डिया इन्फ्रा विद्युत भेन्चर प्रालिले लिएको ३ सय ५० मेगावाटको दूधकोसी–४ परेको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले मंगलबार यो आयोजना खारेज गरी बास्केटमा राखेको छ ।
२३२२ मेगावाटका दर्जन आयोजनाले विवरण बुझाएनन्
उक्त कम्पनीले २०६७ बैशाख १६ गते आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र लिएको थियो । विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि न्यूनतम २ देखि अधिकतम ५ वर्ष हुन्छ ।
धेरै कम्पनीले विभिन्न बाहनामा अनुमतिपत्रको म्याद ७ वर्षसम्म थपिरहेका छन् । केभिआरले पनि त्यही बाटो समातेको थियो । कम्पनीले साढे ७ वर्षसम्म सामाजिक तथा वातावरणीय अध्ययन पूरा नगरेको विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले बताए ।
‘अध्ययन तथा प्रगति विरण पेस गर्न कम्पनीलाई ६ पटकसम्म पत्राचार गरियो, दुई पटक त स्पष्टिकरण नै सोधियो,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘पेस गरेको विवरण तथा स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएपछि अनुमतिपत्र खारेज गरिएको हो ।’
उक्त कम्पनीले सुरुमा नन्ददेवी एग्रो फार्मका नाममा अनुमतिपत्र लिएको थियो । २०६८ असार १३ मा मात्र केभिआरको नाममा सारेको थियो ।
कम्पनीले वर्षौंसम्म अध्ययन, विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए), वित्तीय व्यवस्थापन लगायत काम नगर्नुले आयोजना ओगटेर बस्ने नियत रहेको प्रस्ट हुन्छ । विभागले गत भदौ ५ गते ४० आयोजनालाई आवश्यक विवरण बुझाउन ३५ दिने सूचना समेत जारी गरेको थियो ।
यसैगरी, तोकिएको काम गरेको विवरण बुझाउन विभागले करिब दर्जन आयोजना ओगटेका कम्पनीलाई ताकेता गरेको छ । माग गरेको विवरण पेस नगरे अनुमतिपत्र रद्द गर्ने विभागको चेतावनी छ ।
विभागका अनुसार २ सय ८२ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङ्दी, बूढीगण्डकी ‘क’ र ‘ख’ क्रमशः २६० मेगावाट र १ सय ३० मेगावाट, १ सय ३८ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–१, तीला– १, २ (४ सय ४० मेगावाट र ४ सय २० मेगावाट) को अनुमति लिएका कम्पनीलाई विवरण पेस गर्न ताकेता गरिएको छ ।
१ सय ४० मेगावाटको तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी, २ सय ४० मेगावाटको दूधकोसी–२ लगायत २ हजार ३ सय २२ मेगावाटका आयोजना ओगटेका कम्पनीले विवरण पेस गरेका छैनन् । बूढीगण्डकी ‘क’ र ‘ख’ तथा माथिल्लो मस्र्याङ्दी–१ लिने कम्पनीलाई अन्तिम पटक ७ दिने सूचना जारी गरी स्पष्टिकरण सोधिएको छ ।